How To arki karin Android Spy App On Android Tablet Iyadoo exactspy ?
On: Feb 05Author: adminCategories: Android, Cell Phone Spy, Tracking Cell Phone, Kormeerka Employee, Ku rakib Mobile Spy, Kormeerka Mobile Phone, Mobile Spy, Mobile Spy Online, Control Parental, Spy For Android, Spy For iPhone, basaas Mobile smartphone No Comments
Aan lagu arki karin Android Spy App
La qabsashada siyaabaha si ay ula socdaan kiniin ah Android noqon kartaa faa'iido u leedahay xaalado badan. Socodka kiniin ah ama xitaa raad ah oo telefoonka gacanta Android ma aha sida adag tahay sida mar ahaa; xaqiiqdiina, ee codsiyada aad u baahan tahay si ay u gaadho hawshan ayaa laga heli karaa ganacsi si qof walba adduunka oo dhan. Iyada oo nolosha ku mashquulsan in qof kasta xaq u hadda uu leeyahay, waxay noqotay mid ay adag tahay in qoysku isku meel. Carruurta waxaa la sii kordhaya iyo mararka qaarkood waqti tayo leh oo iyaga la ma sahlana in la helo. The dalabaadka iyo walwalka shaqo u iman kartaa dhexeeya nin iyo naag is a. Ka hor inta aadan wax ka ogaato, carruurtaada ayaa noqday fog iyo xaaskaaga ayaa diiday qabow. Oo leh carruur ah ayaa ka jeestay, waxaad ka iyo xaas ah, kaas oo aan daacad ahayn waxay noqon kartaa xaalad ba'an.
Kormeerka aad Caruurta
Ilaalinta carruurta kuu dhow qaadan doonaa waqti badan iyo dadaal ka dhamaadka laakiin waxa ay noqon doontaa u qalantaa. Si kastaba ha ahaatee, baxsan ammaanka iyo gargaarka guriga, waxay u bandhigan yihiin xubno badan oo xun. Afduubayaashii, waxdhacayaal, kufsiga, gangs iyo xitaa boocsadahana dhaawici carruurtaada, ma aha oo kaliya agagaarka xaafadaha xun laakiin sidoo kale in aad xaafad gaar ah, dugsiga iyo xataa gurigaaga gudihiisa. Mararka qaarkood caruurta, gaar ahaan dhallinyarada, sida waalidkood ilaalinta xogaha qarsoon. Maxaad samayn kartaa in carruurtaadu amaan?
Basaasayeen on a Xaaska Qishka
Sida xaaskiisa ama ninkeeda, aad u baahan tahay lamaane oo ay jirto in ay ku siiyaan kalgacal, hay in aad shirkadda oo dhan fiican iyo xun. Wadajir ahaan ayaa la rejeynayaa in aad kor carruurta si fiican waqti isku mid iyaga ka waxyeelo hayo. In kasta oo guusha dib ugu carruurta waa adag laakiin suurtagal ah, qabashada xaas ah oo la afaaro waa wax kale. Your kalsoonida isbalaarin burburi mararka qaar ku salaysan oo keliya shaki hore iyo tuhun ah. Xaaladdan, aad leedahay si aad u hubiso in isagu ama iyadu si dhab tahey hor inta aadan qaadan tallaabada xigta. Sida aad ogaan karaa runta ku salaysan caddaymo la dafiri karin?
Socodka ilmahaaga ama Xaas Android Tablet
Waa wax fiican technology in halkan waa in ay caawiyaan. Qof kastaa wuxuu qalab mobile maalmahan, iyo xaaskaaga ama caruurta laga yaabaa in mar hore la isticmaalayo kiniiniyada Android. Run ahaantii Waxaad isticmaali kartaa qalabka kuwa si loola socdo dhaqdhaqaaq kasta oo ku lug leh qalabka iyo xiisa leh, aanay xitaa ogeyn lahaa inaad iyaga daawashada. Dhamaan inaad sameyso waa ku rakibi exactspy-arki karin Android Spy App, mid ka mid ah codsiyada ugu waxtar badan si ay ula socdaan ilmahaaga ama xaaska Android kiniin ah ee suuqa maanta.
Oo jahawareer ku-Free Rakibaadda
Ku xiridda ah exactspy-arki karin Android Spy App waa sahlan oo dhakhso ah, kaddib markii aad dhammaysato iibsiga waxaa la siin doonaa Link download ah in ay soo booqdaan isticmaalaya browser ee kiniinka Android aad rabto in aad la socon aad. Saddex ilaa shan daqiiqo ka noqon doonaa in ay download ku filan iyo buuxi rakibo. Marka la rakibo complete, dhammaan hawlaha ka looxa Android lagu uploaded doonaa server shirkadda ee (kaydinta waxaa ka mid ah khiyaamooyinka qiimaha noocuu halkan). Waxaad dib u eegi karaan dhammaan macluumaadka laga qabsaday aad guddi gacanta ku shakhsiyeed, taxane ah oo bog internetka in kaliya waxa aad heli kartaa ka desktop, kiniin ama casriga ah ee mar walba, maalin ama habeen.
Features socodka ah exactspy-arki karin Android Spy App
Iyadoo exactspy-arki karin Android Spy App rakibay, waxaad noqon doontaa si ay u qoraan dhammaan soo wacitaanada awood, akhri fariimaha qoraalka oo dhan, sawirro view, daawado videos, akhri emails, iyo hubiyo xiriir dacaladiisa iyo sidoo kale log taariikhda browser ah. Haddaba exactspy-arki karin Android Spy App ku siinaya inaad ku daray qaababka ilaalo ah awood baad si ay ula socdaan codsiyada loo jecel yahay in kiniinka Android waxa loo isticmaalaa sida Facebook, Skype, Instagram, WhatsApp, iyo Viber. Waxaad kaloo isticmaali kartaa qalabka sida kamarada qarsoodi (shaqo talla galay in sawirro qarsoodi ah qaadan kamarada kiniinka Android ee). Waxaa intaa sii dheer, marka arrimuhu xumaadaan, waxaad samayn kartaa uninstall fog.
Tablet Dhignaashada ah exactspy-arki karin Android Spy App
exactspy-arki karin Android Spy App iyada oo dhammaan kaniiniyada Android sida Galaxy Samsung ay Tab iyo taxane Note shaqayn karaan, LG G gashto, Sony Experia Tablet Z, Google Nexus 7 iyo 10 waxa kaliya oo ku saabsan kiniin kasta oo maamusha nidaamka hawlgalka Android Google ee.
exactspy-arki karin Android Spy App ku siinayaa awood sidaas u badan looxa ah Android in aad ogaan doontaa in ku dhow wax kasta oo xaaskaaga iyo caruurta ay qabanayaan, mar walba, meel kasta oo. Soo ogow haddii uu qof u xoogsheegashada ilmahaaga online ama haddii ilmahaagu uu qorsheynta safarka ah la saaxiibo oo aan kuu sheegaya. Haddii seygaaga ama xaaskaaga ayaa la khiyaameeyay, waa hubaal in ay leeyihiin doonaa caddeynta. Waxay xitaa ka shaqeeyaa inay soo qabtaan tuug marka qalab ka la xado.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan exactspy-arki karin Android Spy App waa maya biilasha bishiiba ee kaydinta, taageero ama codsiga updates farsamo si ay u fikirto iyo ma jiraan eedeeyay qarsoon. Ha ku dhumin waqti kasta fakaro wax ku saabsan iyo caruurtaada u bad baado ama ogaadaan waxa ay runta isla markiiba la isticmaalayo this exactspy-arki karin Android Spy App.
Free app basaas android
Iyadoo exactspy-arki karin Android Spy App waxaad awoodi doontaa inaad si:
Waxaad Download karaa: How To arki karin Android Spy App On Android Tablet Iyadoo exactspy ?
App Android inay basaasaan xaas, Basaas Android app apk, App basaas Android rakibaadda fog, Free app basaas android, Free app Spy Mobile For Android, Aan lagu arki karin Android Spy App
← Ma rabtaa inaad Socodka Whatsapp Messages Free Of exactspy ?
→ Sidee oo lacag la'aan Tracking Cell Phone Location iyaga oo aan Ogaanshaha ?